VirtualBox တွင် Android ကိုမည်သို့ install လုပ်၍ PC တွင် Android ကိုပျော်ရွှင်စေနည်း Androidsis ပါ
Ignatius ခန်းမ | | လဲ tutorial, Android ဗားရှင်း
PC တွင် Android ကိုခံစားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ emulators ကဲ့သို့သုံးခြင်းမဟုတ်ပါ BlueStacksမပါလျှင် PC တစ်ခုတွင် Android ဗားရှင်းကိုတိုက်ရိုက် install လုပ်ပါVirtualBox မှတဆင့် ဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Android emulators များကကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Android ကိုအဆုံးစွန်ဆုံးရနိုင်လိမ့်မည်။
သင်မည်သို့သိလိုလျှင် Android ကို VirtualBox တွင် install လုပ်ပါအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာရန်အဆင့်များအားလုံးကိုသင်ပြသည်။ သို့သော်ဤလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်ပထမဆုံးသိသင့်သောအချက်မှာ၎င်းသည် VirtualBox ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား PC ကို Android တွင် install လုပ်ပြီးစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကဲ့သို့ရွေ့စေသည်။
1 VirtualBox ဆိုတာဘာလဲ
2 VirtualBox ကိုဘယ်လို download လုပ်မလဲ
3 Android ကို install လုပ်ရန် VirtualBox တွင် virtual machine တစ်ခုပြုလုပ်နည်း
4 PC အတွက် Android ကို download လုပ်ပါ
5 Android ကို VirtualBox တွင် install လုပ်ပါ
VirtualBox သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နာမည်ကိုကောင်းစွာနားလည်နိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသော application တစ်ခုဖြစ်သည် လည်ပတ်မှုစနစ်များထည့်သွင်းရန် virtual drive (သေတ္တာများ) ကိုဖန်တီးပါမရ။ ဤလည်ပတ်မှုစနစ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့သုံးသောအတွင်းပိုင်းမှမဟုတ်ဘဲထပ်တလဲလဲတန်ဖိုးရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ငါတို့သည်ဖွင့်ထားသော Windows session တစ်ခုအတွင်း Android သို့မဟုတ် Linux ကိုသုံးနိုင်သည်။
ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် Operating System နှစ်ခုကိုအတူတူသုံးပါ ဒေတာအချို့ကိုတိုင်ပင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများပြန်လည်စတင်ရန်မလိုဘဲ။ operating system တစ်ခု install လုပ်ရန် virtual drive တစ်ခုဖန်တီးသောအခါဤကိစ္စတွင် Android တွင် RAM ကိုသိုလှောင်ရန်နေရာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာတွင်အမာခံများကို ဦး စွာသတ်မှတ်ရမည်။
VirtualBox မှတဆင့် Android ကို install လုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား Android မှအကောင်းဆုံးကိုရစေသည် ကျွန်ုပ်တို့အားမည်သည့်ကန့်သတ်ချက်ကိုမှကမ်းလှမ်းမည်မဟုတ်ပါ PC ပေါ်မှာ Android game တွေကို run ဖို့သုံးလေ့ရှိတဲ့ Android emulators တွေမှာငါတို့တွေ့ခဲ့သလိုပဲ။ ထို့အပြင်ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် emulators များအသုံးပြုသော Android ထက်များစွာပိုမိုအဆင့်မြှင့်ထားသောဗားရှင်းကိုခံစားနိုင်လိမ့်မည်။
VirtualBox ကိုဘယ်လို download လုပ်မလဲ
VirtualBox ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ Oracle၊ ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာကွန်ပျူတာဘီလူးများထဲမှတစ်ခုထို့ကြောင့်သူငယ်ချင်းတစ်စုသည် malware၊ spyware နှင့်အခြားမကောင်းသော software များထည့်ခြင်းဖြင့်ယူရိုလေးဝင်ငွေရစေသောအပလီကေးရှင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။
VirtualBox ဆိုတာဘာလဲ၊ အဲဒါရဲ့နောက်ကွယ်ကကုမ္ပဏီဆိုတာငါတို့သိတာနဲ့အဲဒါကို download လုပ်ဖို့အချိန်ကျပြီ။ VirtualBox ကို download လုပ်ရန်၊ ငါတို့သည်၎င်း၏တရားဝင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုတည်းကိုသာသီးသန့်အားကိုးရမည် ဒီ link ကတဆင့်.
ငါတို့ကို download လုပ်ခွင့်ပေးတဲ့အခြား web page တွေကိုသုံးဖို့မေ့လိုက်ပါဤနည်းအားဖြင့် web page သည်ကျွန်ုပ်တို့အားခိုးဝင်လိုသောတပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အပလီကေးရှင်းများတပ်ဆင်ခြင်းကိုကာကွယ်လိမ့်မည်။
ငါတို့ကမင်းကိုငါပြထားတဲ့တရားဝင်စာမျက်နှာကနေ VirtualBox ကို download လုပ်ပြီးတာနဲ့အဲဒါကို install လုပ်ဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်လျှောက်လွှာပေါ်တွင်နှစ်ကြိမ် နှိပ်၍ installation လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသည်အထိ Next ကိုနှိပ်ပါ။ တပ်ဆင်မှုသည်မရှုပ်ထွေးပါ၊ ရှုပ်ထွေးနေသည့်အရာသည် virtual machine တစ်ခုဖန်တီးရန်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြသသောလုပ်ငန်းစဉ်
Android ကို install လုပ်ရန် VirtualBox တွင် virtual machine တစ်ခုပြုလုပ်နည်း
VirtulalBox ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ PC (သို့) Mac (operating system နှစ်ခုလုံးတွင်ရနိုင်သည်) တွင် install ပြီးသည်နှင့်ပထမဆုံးလုပ်ရမည့်အရာဖြစ်သည်။ Virtual Drive တစ်ခုဖန်တီးပါငါတို့က Android ကို install လုပ်မယ့်ယူနစ်ပါ။ ဒီယူနစ်ကိုငါတို့တည်ထောင်ထားတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးဖန်တီးလိမ့်မယ်၊ hard disk space နဲ့ RAM memory နဲ့ processor cores နှစ်ခုလုံးကိုငါတို့တည်ဆောက်တယ်။
VirtualBox ကို install လုပ်ပြီးသည်နှင့်၎င်းကို execute လုပ်ပါ၊ ထိပ်ဆုံး menu သို့သွားပြီး New ကိုနှိပ်ပါ ငါတို့ကမင်းကိုပြတဲ့အတိုင်းဘဲငါတို့က parameters တွေကို configure လုပ်တယ်:
နာမတျောကို: ငါတို့ကွန်ပျူတာမှာလုံးဝနီးပါးထည့်သွင်းရမယ့် Android ဗားရှင်းကိုခွဲခြားသတ်မှတ်မယ့်နာမည်ကိုထည့်ပါ။
စက်ဖိုင်တွဲAndroid မှာငါတို့ install လုပ်ချင်တဲ့ folder ကိုငါတို့ရွေးတယ်။
ပုံစံAndroid သည် Linux ကိုအခြေခံသည်၊ ထို့ကြောင့်ဤအပိုင်း၌ငါတို့သည် Linux ကိုရွေးချယ်ရမည်
ဗားရှင်းLinux ဗားရှင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်မည့် Android version ၏တည်ဆောက်ပုံနှင့်အတူ Linux 2.6 / 3x / 4x ကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်သည် (၎င်းကို 64-bit version သို့ထည့်သွင်းရန်အကြံပြုသည်)
မှတ်ဉာဏ်အရွယ်အစား: RAM2GB နှင့်၎င်းသည်လုံလောက်သည်ထက်ပိုသည်၊ သို့သော်ဤ virtualization ကိုကျွန်ုပ်တို့ရည်စူးပါက RAM ပိုများလေ၊ စွမ်းဆောင်ရည်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်လာလိမ့်မည်။
hard disk ကို: ဒီမှာငါတို့က virtual hard disk တစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့ဒီ option ကိုရွေးရမယ်။
နောက်ဆုံးတော့ create ကိုနှိပ်ပါ။ နောက်တစ်ခုငါတို့ရမယ် android version ကို install လုပ်ပါ အောက်မှာငါပြထားတဲ့အဆင့်တွေအတိုင်းအရင်တုန်းကငါတို့ download လုပ်ရမယ်။
PC အတွက် Android ကို download လုပ်ပါ
VirtualBox ကို install လုပ်ပြီးတာနဲ့ငါတို့ install ချင်တဲ့ Android version ကို download လုပ်ရမယ်။ မည်သည့် Android ဗားရှင်းမှအလုပ်မလုပ်ပါဒါပေမယ့် PC ပေါ်မှာသုံးဖို့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့အထူးတစ်ခုပါ။ Android-x86 ပရောဂျက်သည်ပြဿနာများမရှိဘဲ VirtualBox မှတဆင့် PC (သို့) Mac တွင် download လုပ်ပြီး install လုပ်ရန် Android (32 နှင့် 64 bits) ၌ကျွန်ုပ်တို့ကိုကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းများပေးသည်။
မသန်စွမ်း နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို download လုပ်ပါကျနော်တို့အောက်ပါသွားရောက်ကြည့်ရှုရမည်ဖြစ်သည် link ကိုမရ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာနှင့် Android ဗားရှင်းကိုအမြင့်ဆုံးရရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့် 64-bit version ကို download လုပ်ရန်အကြံပြုလိုပါသည်။ PC ဗားရှင်းကို install လုပ်ရန်ဤ Android ဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းသည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။
Android ကို VirtualBox တွင် install လုပ်ပါ
ငါတို့လိုအပ်သော Android ဗားရှင်းကို download လုပ်ပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်မည့် virtual machine ကိုဖန်တီးခဲ့သည် (အမိန့်သည်ဂရုမစိုက်ပါ)၊ ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးထားသော virtual machine ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသည်Android version ၏ ISO ကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးပြီး၎င်းကိုလုပ်ဆောင်သည်။
တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏ပထမဆုံးဖန်သားပြင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားနောက်ဆုံးရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်စရာသုံးခုကိုပြသည်။ တပ်ဆင်ခြင်း - Android -x86 ကို harddisk ထဲသို့ထည့်ပါ။
နောက်တစ်ခု၊ ငါတို့ install လုပ်ချင်တဲ့ယူနစ်ကိုငါတို့မဖန်တီးရသေးတာနဲ့, ကိုကလစ်ပါ ဖန်တီး / partitions ကိုပြုပြင်ပါမရ။ နောက်တစ်ခုကတော့မေးခွန်းပါ GPT ကိုသုံးလိုသလား။ ငါတို့မဖြေဘူး။
နောက်တစ်ဆင့်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့် virtual hard disk ပေါ်တွင် partition တစ်ခုကိုဖန်တီးလိမ့်မည် နယူး - မူလတန်း - bootable - ရေးသားမရ။ ငါတို့ရေးနေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြီးအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတာငါတို့အတည်ပြုတယ် Yes key ကိုနှိပ်ပါ မိတ်ဆက်ခြင်း.
partition တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးတာနဲ့ငါတို့ရမယ် ၎င်းကို ext4 format ဖြင့် format လုပ်ပါမရ။ နောက်တစ်ခုကငါတို့လိုချင်တာကိုငါတို့အတည်ပြုတယ် GRUB boot loader ကိုသုံးပါ နောက်ဆုံးတော့ငါတို့ခွင့်ပြုချက်ကိုအတည်ပြုတယ် ရေးသား / ဖတ် (ရေးရန်ဖတ်ပါ) ။ အခုဆိုရင်ငါတို့ကထိုင်ပြီးတပ်ဆင်မှုမပြီးမချင်းစောင့်နေရမယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ PC တွင် Android ကို install လုပ်ပြီးသည်နှင့်၎င်းသည်ပထမဆုံးအကြိမ်စဖွင့်သည်နှင့်၎င်းသည်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုကဲ့သို့တူညီသောအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Google အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်ကိုထည့်ပါ ငါတို့ဒီဗားရှင်းကိုသုံးချင်တယ်။
ပြီးရင်တော့ Play Store ကိုသွားပြီးငါတို့လိုချင်တဲ့ application တွေကို install လုပ်ပါ။ application များစွာကို touch interface ဖြင့်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး BlueStacks ကဲ့သို့ emulator တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ applications များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » Android ဗားရှင်း » VirtualBox တွင် Android ကိုမည်သို့ install လုပ်၍ PC တွင် Android ကိုပျော်ရွှင်စေနည်း
ငါ Facebook Messenger မှာအပိတ်ခံလိုက်ရတာကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ